Toyota na-emerụ malaysia ka ọkpụkpụ ụgbọala
Nkọwa:Igwe mkpuchi Silicone Keyboard Toyota Vios,Igwe mkpuchi mkpuchi nke Toyota na Malaysia,Obere mkpuchi Silicone Car Malaysia
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Toyota na-emerụ malaysia ka ọkpụkpụ ụgbọala
Ihe Nlereanya.: toyota1403
Anyị na ụlọ ọrụ na-emepụta ụgbọala na-edozi ụgbọala bụ nke na-emepụta ụdị ihe mkpuchi ọkwọ ụgbọala dị iche iche nke silicone . Afọ 7 'na -eme ka mkpuchi mkpuchi silik anyị zuru okè, na onye niile na-azụ ya na-enwe afọ ojuju maka mkpuchi mkpuchi dị n'ime ya . ihe ejiji na-acha odo odo silicone bụ otu nke kasị mma n'ire anyị silicone remote isi ikpe n'ihi na ọ na-emetụ aka, na-enweghị isi, na-enwe mmekọrịta enyi na enyi. akwa ebe a na-emerụ ihe mkpuchi mkpuchi silik dị kwa nnukwu mkpa ebe ọ bụ na ọ dị elu na mba Europe. Anyị nwere obi ike na ị ga-ahụ nke a n'anya mkpuchi mkpuchi mkpuchi ụgbọala silica .
Onye ọ bụla na- ejide ya na Silicone nwere atụmatụ ndị a:
2. Ogwe mkpịsị ugodi klaịlị bụ nke zuru oke maka igodo ụgbọala gị Toyota .
4. Anyị nwere uru ọnụahịa nke nnukwu ihe mkpuchi kọfịlị dị elu ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu.
5. Ọdịdị okpomọkụ: -40 centigrade na 2 20 centigrade.
6. ihe mkpuchi mkpuchi nke mkpụrụ osisi dinyota na- enwe ihe ndị na-adịghị mma, gburugburu ebe obibi na enyi na enyi, nguzo ọkụ, na-adịgide adịgide, mmiri na-adịghị ọcha, na-egosi na ájá.
2017 Toyota corolla silicone isi cover bụ ọ dịghị nsogbu na environmentally friendly.When ị jide a mara mma imewe isi mgbe roba ekpuchi maka Camry n'aka gị, ọ na-ele soft, ezigbo onye na light.You ga-n'anya na akpaaka 3 mkpọchi ájá - àmà silicone jel ụgbọ ala isi cover mgbe ị nwere ya.
Ihe ndị ọzọ dị n'ihu na azụ n'akụkụ mkpuchi mkpuchi ụgbọala Toyota . Ụdị agba ọ bụla nwere ike ịdọrọ ike
Ọrụ anyị maka mkpuchi mkpuchi ụgbọala
Igbe mkpuchi mkpuchi silik maka koleos Kpọtụrụ ugbu a
Ebube BMW nke nwere isi ihe nkpuchi Kpọtụrụ ugbu a
Hyundai smart silicone mkpuchi mkpuchi ikpe Kpọtụrụ ugbu a
Igbe mkpuchi mkpuchi silik maka hyundai i30 Kpọtụrụ ugbu a
VW gafefe na-agbanwe agbanwe na mkpụrụedemede igodo Kpọtụrụ ugbu a
Igwe mkpuchi Silicone Keyboard Toyota Vios Igwe mkpuchi mkpuchi nke Toyota na Malaysia Obere mkpuchi Silicone Car Malaysia Igwe Mkpuchi Silicone Car Toyota Igwe mkpuchi Silicone Car VW Ejiri mkpuchi Silicone Car Toyota Igwe mkpuchi Silicone Car Ford Igbe mkpuchi Silicon Car Smart